I-Electronic Universal Testing Machine Factory-China Electronic Universal Testing Machine Manufacturers, Suppliers
Uhlobo lwe-YAW-300C oluzenzekelayo lwe-Flexural kunye neCompressive Testing Machine
I-YAW-300C i-automatic flexural and compressive test machine sisizukulwana esitsha somatshini wokuvavanya uxinzelelo osanda kuphuhliswa yinkampani yethu.Isebenzisa iisilinda ezimbini ezinkulu nezincinci ukufezekisa amandla oxinzelelo lwesamente kunye novavanyo lwamandla e-samente.
WEW uthotho microcomputer screen umboniso hydraulic umatshini wokuvavanya jikelele isetyenziswa ikakhulu tensile, ucinezelo, ukugoba kunye nezinye iimvavanyo yokusebenza koomatshini bezinto zentsimbi.Emva kokongeza izixhobo ezilula, inokuvavanya i-samente, ikhonkrithi, izitena, iileyili, irabha kunye nemveliso yazo.
I-injini engundoqo inezikrufu ezibini eziphakamileyo, izikrufu zokukhokela ezibini, kunye nesilinda esisezantsi.Indawo yokuqina ibekwe ngasentla kwenjini ephambili, kwaye indawo yovavanyo yoxinzelelo kunye nokugoba ibekwe phakathi komqadi osezantsi we-injini ephambili kunye nebhentshi yokusebenza.
WE uchungechunge lwedijithali umboniso hydraulic umatshini wokuvavanya jikelele isetyenziswa ikakhulu tensile, ucinezelo, ukugoba kunye nezinye iimvavanyo yokusebenza koomatshini bezinto zentsimbi.Emva kokongeza izixhobo ezilula, inokuvavanya i-samente, ikhonkrithi, izitena, i-tile, i-rubber kunye nemveliso yayo.
Umatshini wokuVavanya ukuqina koMbhobho weWDWG Microcomputer
Lo matshini wokuvavanya ufanelekile ukuqina kwendandatho, ukuguquguquka kwendandatho kunye novavanyo lwe-flatness lwemibhobho eyahlukeneyo.Olu chungechunge lwezixhobo zokulinganisa kunye nokulawula zinomsebenzi ozinzile, imisebenzi enamandla, kunye nesofthiwe eyakhelwe-ngaphakathi inokukhutshelwa kwaye iphuculwe.
I-WDG Digital Digital Digital Pipe Ring yokuvavanya ukuqina komatshini wokuvavanya
Umatshini wokuvavanya ukuqina kombhobho wedijithali ulungele ukuqina komsesane, ukuguquguquka komsesane kunye novavanyo oluthe tyaba lwemibhobho eyahlukeneyo.Ngokweemfuno ezikhethekileyo zabasebenzisi, kunokonyusa imisebenzi emithathu yovavanyo yomatshini wovavanyo wendalo yonke (okt ukuxinana, ukunyanzeliswa, ukugoba).